टेक्नोलोजीको विकासको साथ, एक किओस्कमा टच ऑलको उदयले मानिसको जीवनलाई बढी सुविधाजनक र बढी बुद्धिमान बनाउँदछ। यद्यपि टेक्नोलोजी दोहोरो तरवार हो। उत्पादको संख्याको बृद्धि संग, बजार अराजक देखिन्छ, र अधिक र अधिक उत्पादनहरु देखा पर्दछ, गुणवत्ता असमान बनाउँदछ।
त्यसोभए तपाईं कसरी एक लागत प्रभावी उपकरण छनौट गर्न सक्नुहुन्छ?
१ LCD टच स्क्रीन
LCD टच स्क्रिन मेसिनमा बारम्बार प्रयोग गरिन्छ, त्यसैले यसको गुणात्मक महत्त्वपूर्ण छ। मूल प्रसिद्ध ब्रान्ड LCD स्क्रिनको मूल्य केही अधिक छ, तर दृश्य र स्पर्श प्रभाव बिल्कुल फरक छन्। एक कम गुणस्तरको LCD स्क्रिन निश्चित रूपमा प्रयोगको समयमा सम्पूर्ण मेसिनको विफलता हो। त्यो मात्र होईन तर टच स्क्रिनको गुणस्तर पनि स्क्रिनको कुञ्जी हो। वर्तमानमा, त्यहाँ प्रतिरोधात्मक टच, क्यापसिटिभ टच र इन्फ्रारेड टच बजारमा छन्। लोकप्रिय एक इन्फ्रारेड मल्टी टच हो, टच संवेदनशीलता तुलनात्मक रूपमा उच्च छ, र क्यापेसिटिभ टच पनि धेरै राम्रो छ। प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नै उद्देश्य र आवश्यकता अनुसार छनौट गर्दा छनौट गर्नुपर्छ।
२. उत्पाद प्रदर्शन
मेशिनको राम्रो प्रयोगको साथसाथ यसको आफ्नै प्रदर्शन र उत्पाद प्रभावकारिता पनि विशेष महत्त्वपूर्ण हुन्छ। टच एकीकृत मेसिन कम्प्यूटर र प्रदर्शन एकीकृत एक उत्पाद उपकरण हो, र सम्बन्धित सफ्टवेयर प्रयोगकर्ताको आवश्यकताहरू पूरा गर्न कन्फिगर गरिएको छ। त्यसपछि पहिलो उज्यालोपना, रिजोलुसन र प्रतिक्रिया समयको जाँच गर्नुहोस् र खरीद गर्दा होस्टको कन्फिगरेसन। दोस्रो, यसले हाम्रो वास्तविक आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ कि भनेर हेर्न टच सफ्टवेयरको प्रकार्य जाँच गर्नुहोस्।
ग्राहकको लागि, खरीद साधारण उपकरण मात्र होईन, खरीद एक पेशेवर टच-इन-वन कियोस्क निर्माता हो। त्यसकारण, यस प्रक्रियामा, हामीले भविष्यमा प्रयोग प्रक्रियामा कुनै चिन्ता नहुने कुरा सुनिश्चित गर्न निर्माताको सेवाको गुणवत्ताको पूर्ण जाँच गर्नुपर्नेछ।
सारांशमा, बिन्दुको तीन भागहरूसँग मिलेर तिनीहरूको तुलना गर्न, हामी निश्चित रूपमा लागत प्रभावी उत्पाद उपकरणहरू खरीद गर्नेछौं।